China 55 HRC2Flutes ပလွေမှုတ်ထားသောနှာခေါင်းအဆုံးစက်ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်ဖြန့်ဖြူးသူများ | မင်္ဂလာဆောင်
Ball Nose End Mill စက်ရုံအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်း - ၅၅ HRC ...
55 HRC2Flutes ပလွေမှုတ်နှာခေါင်းအဆုံးစက်
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ - ZK30UF ကို ၁၀% Co ပါဝင်မှုနှင့် ၀.၆um ဆန်အရွယ်အစားဖြင့်အသုံးပြုပါ။ ပုလွေများ - ပုလွေ ၃ လုံးသည်တုန်ခါမှုကိုလျော့နည်းစေသည်
Type： Double-edge ဒီဇိုင်းသည်ကောင်းမွန်သောချောချောမွေ့မွေ့ကိုရရှိပြီး semi-finish နှင့် finish machine အတွက်သင့်လျော်သည်။
B အမျိုးအစား: တစ်ဖက်တည်းဒီဇိုင်း၊ ချွန်ထက်သောဓါးသွား၊ ချစ်ပ်များကိုဖယ်ရှားရန်ကောင်းမွန်သည်။ မြန်သောဖြတ်ခြင်းမြန်နှုန်း၊ အကြမ်းအားဖြင့်စက်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
၁။ အထူးဖြတ်တောက်ခြင်း Edge - အထူးဖြတ်တောက်ခြင်းသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ကိရိယာများနှင့်စက်များ၏သက်တမ်းသည်ကြာရှည်လိမ့်မည်
2. Smooth And Wide Flute: ချောမွေ့ပြီးကျယ်ပြန့်သည့်ပုလွေသည်ရှများကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာဖယ်ရှားပေးလိမ့်မည်
၃။ အပူဒဏ်ခံနိုင်သည့်ဖုံးအုပ်ခြင်း - မြင့်မားသောအပူခံနိုင်ရည်ရှိသည့် HELICA သုတ်ဆေးဖြင့်မြန်နှုန်းမြင့်သောလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်
၄။ ကြေးဝါဖြင့်ဖုံးအုပ်ခြင်း။ ကြေးဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ပွန်းပဲ့ပျက်စီးခြင်းကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လွယ်ကူသည်
၅။ အရည်အသွေးမြင့်သောကုန်ကြမ်း - ကုန်ကြမ်းများကိုမာကျောသော၊ အမှုန့်အရွယ်ကာဗွန်အဖြိုက်နက်များဖြင့်အသုံးပြုသည်
၆။ ပိုလန်မျက်နှာပြင်ကုသခြင်း - မြင့်မားသောမျက်နှာပြင်သန့်စင်ခြင်းဖြင့်ပွတ်တိုက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်၊
ပုလွေအချင်း (mm) ပုလွေအရှည် (mm) Shanks အချင်း (mm) ယေဘုယျအရှည် (mm)
R0.25 15 ၃.၁၅၇ 38
R0.5 15 ၃.၁၅၇ 38
R0.75 15 ၃.၁၅၇ 38
R1.0 15 ၃.၁၅၇ 38
R0.25 ၂၀.၅450
R0.5 ၂၀.၅450
R0.75 ၂၀.၅450
R1.0 ၂၀.၅450
R0.25 ၂၀.၅650
R0.5 ၂၀.၅650
R0.75 ၂၀.၅650
R1.0 ၂၀.၅650
R0.25 ၃၀.၅675
R0.5 ၃၀.၅675
R0.75 ၃၀.၅675
R1.0 ၃၀.၅675
R1.5 ၃၀.၅675
R2.0 ၃၀.၅675
အခုတော့ငါတို့မရှိတဲ့နေရာအသစ်စျေးကွက်တွေထဲ ၀ င်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးငါတို့ထိုးဖောက်ပြီးတဲ့နောက်စျေးကွက်တွေဖွံ့ဖြိုးလာအောင်လုပ်နေတယ်။ အရည်အသွေးမြင့်မားပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသောစျေးနှုန်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက် ဦး ဆောင်သူဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်တစ်ခုခုကိုစိတ်ဝင်စားပါကဖုန်းသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဥက္ကThe္ဌနှင့်ကုမ္ပဏီ ၀ င်များအားလုံးသည်ဖောက်သည်များအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးလိုကြပြီး၊ တောက်ပသောအနာဂတ်အတွက်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပမှဖောက်သည်များနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးကြိုဆိုလိုကြသည်။
ယနေ့အချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမေရိကန်၊ ရုရှား၊ စပိန်၊ အီတလီ၊ စင်ကာပူ၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ ပိုလန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏တာ ၀ န်မှာအရည်အသွေးအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များကိုအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးအပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတယ်!
ဖောက်သည်များ၏ကျေနပ်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေမှုဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဖြစ်သည်။ ရေရှည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းသောစီးပွားရေးဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တရုတ်နိုင်ငံအတွက်သင့်အတွက်စိတ်ချရသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အတိုင်ပင်ခံကဲ့သို့သောအခြားဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းကမ်းလှမ်းနိုင်ပါတယ်။
စျေးကွက်တွင်အလားတူအစိတ်အပိုင်းများကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မော်ဒယ်အတွက်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းကိုတီထွင်ရန်သင်၏အကြံဥာဏ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးနိုင်သည်။ သင်၏လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းရန်အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းပါမည်။ ငါတို့ကိုချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ
ရှေ့သို့ လူမီနီယမ်အဘို့အ HRC55 Carbide3ပုလွေရှည်လျားသောအဆုံး Mills က
နောက်တစ်ခု: HRC45 Carbide စံတာရှည်အစက်အပြောက်လေ့ကျင့်ခန်း
55 HRC Carbide2Flute Micro End စက်
55 HRC Carbide3Flute Standard အရှည်ကြိတ်စက် ...
55 HRC Carbide2Flute စံသတ်မှတ်ထားသောအရှည်ဘောလုံး ...
55 HRC Carbide4Flute Standard Length ထောင့် R ...
55 HRC ရင်ပြင်အဆုံးကြိတ်-2 ပုလွေ